Xayeysiinta: Sida Macaamiisha ay ugu guuleysteen dagaalka u fiirsigooda | Martech Zone
Khamiis, Juun 11, 2013 Arbaco, Juun 10, 2013 Douglas Karr
Tartankan 'epic', waa in la arko bandhigga, Hubspot waxay baareysaa taariikhda DHAMMAAN iyo isbeddelka xayeysiinta si loo muujiyo sida jaangooyooyin dhammaystiran (haddana la dheefshiidi karo) ugu weyn ee xayeysiinta u horseeday cudur faafa oo aan dan ka lahayn macaamiisha, iyo sidoo kale waxyaabaha ay suuqleydu ka qaban karaan si ay macaamiisha ula gaaraan sannadaha soo socda.
Ha ku niyad jabin isweydaarsiga 472 - 29.39% kuwaa ayaa u heellan sawirro cabsi leh iyo animations ka dhigaya neecaw si looga gudbo. Soo dejiso a Nuqul bilaash ah oo soojeedintan ah + jadwal xayeysiin daabacan.
Waa kuwan 20 xaqiiqooyin xiiso leh oo ay ku jiraan:
Xayeysiintu waxay jirtay illaa 3000 oo dhalashadii Masiixiga!
63% macaamiisha ayaa u baahan inay maqlaan sheegashada shirkadda 3-5 jeer ka hor intaysan run ahaan rumaysan.
Waxay u badan tahay inaad ka badbaado shil diyaaradeed halkii aad riixi lahayd xayeysiiska boorarka.
Xayaysiiskii ugu horreeyay ee wargeysku wuxuu ahaa 1650kii si loogu abaalmariyo 12 fardo oo la xaday.
Hay'adda ugu horreysa ee xayeysiinta xirfadleyda ah waxaa laga bilaabay 1841 magaalada Philly.
Xayeysiintu waxay markii ugu horeysay noqotay edbinta tacliimeed ee 1900 ee Woqooyi-galbeed.
Unilever & JWT waxay markii ugu horreysay shuraako noqdeen 1902, iyagoo abuuray xiriirkii ugu dheeraa taariikhda xayeysiinta.
Nooca caanaha dhallaanka ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee kafaala qaada blimp (sanadkii 1902).
Hay'addii ugu horreysay ee xayeysiinta ah ee soo saarta wax soo saar waxay ahayd JWT iyadoo wakiil ka ah shirkadda P&G sanadkii 1911, badeecadooda Crisco.
Goobtii ugu horreysay ee xayeysiiska raadiyaha waxaa la siiyay 1922: $ 100 muddo toban daqiiqo ah!
Sanadkii 1929, Lucky Strike wuxuu ku qarash gareeyay $ 12.3M xayeysiinta, tan ugu badan taariikhda ilaa heerkaas si kor loogu qaado kaliya hal shey.
Xayaysiiskii ugu horreeyay ee TV-ga wuxuu ahaa Bulova Clocks & wuxuu gaadhay 4000 TV.
1946, Mareykanku wuxuu lahaa 12 TV. Ilaa 2011? 1,700.
Aqoonsiga soo-wacaha wuxuu ku dhowaa inuu arko telemarketers ilaa 1981.
Sannadkii 1993, internetka oo dhan wuxuu lahaa 5 milyan oo isticmaale - ama u dhiganta 0.45% saldhigga adeegsadaha Facebook ee hadda.
Emailka ugu horreeya waxaa diray shirkadda sharciga ee Canter & Siegel 1994.
Sannadkii 1998, celceliska macaamilku wuxuu arkay 3,000 oo farriimo suuq ah maalintii.
Sanadkii 2009, FTC waxay dejisay xeerar taxane ah oo mamnuucaya markhaatiyada macaamiisha aan runta ahayn.
Sannadkii 2011, waxaa jiray in ka badan 1 tiriliyan oo bog oo khadka tooska ah ah. Taasi waa 417 bog oo loogu talagalay 1dii qofba!
Eric Schmidt oo ka tirsan Google ayaa tusaale u soo qaatay “2dii maalmoodba mar, waxaan abuurnaa macluumaad aad u badan sidii aan sameynay waagii ilbaxnimada ilaa 2003.